Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya? - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf
Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle, Xaaf, ayaa taageeray go'aanka xulufadaha Sucuudiga, halka madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi "Carabeey" iyo goddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir ay taageereen go'aanka dowladda federaalka iyaga oo cuskaday qodobka 54-aad ee dowladda dhexe siinaya awoodda ay go'aan uga gaari lahayd siyaasadda arrimaha dibadda.
Hase yeeshee waxa ay xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu sheegay in dowladda federaalka ay diyaaradii uu la socday "ku xayirtay magaalada Hargaysa".
Xaaf ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri "Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay tahay dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah".
Banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo go'aanka madaxweyne Xaaf ayaa lagu qabtay meelo ka mid ah Galmudug, loogana soo horjeedo moowqifka dhexdhexaadnimada ee dowladda dhexe.
Image caption Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed Cusmaan Jawaari oo loo gudbiyay mooshin ka dhan ah Imaaraatka
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: "waxaan diidannahay falal aanu u aragnay in ay dastuurka ka soo horjeedaan".
"Falalka uu ku dhaqmo safiirka Imaaraatka ee dalka ayaa ka soo horjeednaa. Ma ogin in dowladdiisu ku ogtahay iyo inkale. Waxaanu doonaynaa in xiriirka la hagaajiyo", ayuu yiri xildhibaan Zakariye.
Mooshinka xildhibaanada ayaa ka dambeeyay kadib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in dowladda ay qaadato go'aan ay ku taageereyso isbeheysiga Sucuudiga ee go'doominta ku haya dalka Qadar.
''Waxaan ku wada jirnaa isku urur, midka Jaamacadda Carabtan, kan Islaamkan, iyo midka Qaramada Midoobey baan ku wada jirnaa. Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa'il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn", ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay.
''Saldhigyo aynaan ogeyn iyo ciidamo ay iska qortaan oo aynaan ogayn iyo shacabka oo ay toos ula xiriirto ayaan ku eedeyneynaa", ayaa lagu qoray mooshinka baarlamaanka loo gudbiyay.
Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan "Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo fursad aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda".
Lahaanshaha sawirka Raadiyow Muqdishoow
Image caption Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in uu gogol dhigayo Kismaayo
Waxa uu ku baaqay in uu Kismaayo ku fidinayo gogol la'isugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo turxaan bixiyo madmadoowga soo baxay.
Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka hadlin moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go'aanka dhowladda dhexe.
''Khilaafka ma lahan hormar, waxaana loo baahanyahay in Soomaalida ay is ixtiraamto, ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul goboleed ha noqoto, qadarin iyo wadatashi ayaa lagu gaari karaa horumar" ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam oo farta ku fiiqay in loo baahanyahay in dastuurka la soxo haddii ay jiraan qodobo aan kala caddayn.
''Waxaan rabnaa in aan magaalada Kismaayo dhigno gogol, taas oo ay marka hore isugu imanayaan madaxda maamul goboleedyada, oo aan ka wada hadalno, muxuu yahay doorka aan leenahay, ka wada hadalno siyaasadda arrimaha dibada yaa xaq u leh, maxaan anaga xaq u leenahay, kadibna aan madaxda dowladda dhexe la fariisanno oo aan wax isla meel dhigno" ayuu yiri Axmed Madoobe.
Xal ma laga gaari doonaa khilaafka waddamada Khaliijka?
Image caption Sawir Hore : Muranka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxa uu soo bilowday xili hore
Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go'aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd 31-dii bishii Luuliyo, 2014-kii, xilligaas oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Puntland. Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray.
Image caption Ashkir Nuur wasiiru dowlaha warfaafinta iyo isgaarsiinta Puntland
''Sida ku cad Distuurka Federaalka ah qodobkiisa 54-Aad Awoowdaha dowladda Federaalka ah waa: difaaca Qaranka, Jinsiyadda, Xiriirka dibadda, wixii intaa ka soo hara sida Dastuurka Federaalka ahba uu qeexayo, way u madax bannaanyihiin dowlad goboleedyadu in ay aayahooda ka tashadaan, Xeerkaana waa mid loo baahnaa in Puntland lagu war-galiyo" ayuu yiri Wasiiru dowlaha wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Puntland Cabdifitaax Nuur Axmed (Ashkir) oo Bishii June ee sanadkan warbaahinta kula hadlay Garowe.
Waxaase xaalka uga sii daraya in aysan jirin meel lagu kala boxo, sida maxkamad dastuuri ah oo aanan wali dhisnayn, taas oo go'aan ka gaari lahayd arrimaha ceynkan oo kale ah oo la'isku qabsado.